Funda ukuRhweba ngenzuzo ephezulu ngo-2022 - Learn2Trade | Funda ukurhweba
Iiplatforms zokuRhweba ngeDemo ye-Forex
Eyona Sifanisi se Forex
Uluqala njani uRhwebo lwe-Forex
Urhweba njani nge Forex
Eyona Wallet yeBitcoin
Uyithenga njani imali yeBitcoin
Indlela yokuthenga iCardano
Indlela yokuthenga iTezos
Indlela yokuthenga iTron
Indlela yokuthenga i-EOS
Indlela Thenga Zcash
Indlela yokuthenga iNeo
Indlela Thenga Dash
Indlela yokuthenga i-XRP
Uyithenga njani iLitecoin
Indlela yokuthenga i-Binance Coin
Indlela yokuthenga i-IOTA
Iziza zeCrypto Staking
Iimpawu zokurhweba zePolkadot
Iimpawu zoRhwebo lweCardano
Iimpawu zoRhwebo lweBinance Coin
Iimpawu zokurhweba ngeChainlink
Iimpawu zoRhwebo lweLitecoin
Iimpawu zoRhwebo lweBitcoin
Iimpawu zokuRhweba ngemali yeBitcoin
Iimpawu zokuRhweba ze-XRP
Iimpawu zoRhwebo zeStellar
Iimpawu zoRhwebo lwe-Ethereum
I-eToro Copy Trading
IiBroker ezigqwesileyo zase-UK
IiBroker ezigqwesileyo zaseOstreliya
Eyona Brokers SA
Best Brokers Kwabaqalayo
Iimpawu eziphambili zeMT4
IiBroker zokurhweba ngombona
IiBroker zokuRhweba ngeSilivere
IiBrokers zokuRhweba ngobhedu
IiBrokers zokuRhweba ngeGesi yeNdalo
IiBroker zokurhweba ngengqolowa
IiBroker ezisasazekileyo eziphantsi
Ubuncinci beDiphozithi Brokers
Iibrokers zoMenzi weMakethi
Funda ukurhweba ngezona zibonakaliso ze-Forex zeHlabathi kunye noMboneleli weMiqondiso ye-Crypto
Iimpawu zeeFreeks Simahla Iimpawu zeCrypto zasimahla
IKREPTI 0.01 USD
IKREPTI 0.25 USD
I-75% yeeakhawunti zentengiso zeCFD zilahlekelwa yimali
Qala Ukufumana Iimpawu ze Forex zasimahla kunye neeMpawu zeCrypto ngokuFunda ukuRhweba
Izaziso ezikhawulezayo kwi-imeyile yakho zivela ku-Funda ukuRhweba
Iingcali ze Forex
Uhlalutyo lobuGcisa bemihla ngemihla kunye neeNgcebiso ngokuRhweba
Phakathi kwe-4-5 echanekileyo, izibonakaliso zeNzuzo ngosuku
Ukuya kuthi ga kwi-5 echanekileyo, imiqondiso eneNzuzo ngosuku
Ukufikelela ngokulula kwiiMpawu ze-Forex kunye neeMpawu ze-Crypto
Uluntu lwabarhwebi abangaphezu kwe-70.000 abasebenzayo
Izilumkiso zexesha lokwenyani, zonke ngeTelegram
Iimpawu zeeFreeks Simahla
Iimpawu zeCrypto zasimahla
Iintsuku ezingama-30 isiqinisekiso sokuBuyisa imali
Iimpawu ze-Forex-iinyanga ezi-6
Ukuya kuthi ga kwiMiqondiso emi-3 ethunyelwa yonke imihla
Ireyithi yokuphumelela engama-76%
Imali kuMngcipheko ngoRhwebo ngalunye
Iqela leTelegram leVIP
Iimpawu zeVIP Forex
Iimpawu zeCrypto-iinyanga ezi-6
Ukuya kuthi ga kwiMiqondiso emi-5 ethunyelwa yonke imihla
Iimpawu zeVIP Crypto
IiKhosi zeVidiyo ezi-5
UkuFikelela ubomi bonke
UkuHamba kwezoRhwebo kunye nezeMfundo
Uninzi lwezifundo zophando
I-15 + Iminyaka
Iimpawu, ikhosi, kunye neakhawunti exhaswa ngemali
Gcwalisa ukuThenga kwakho
Ngamakhadi etyala okanye iApple Pay
Emva kokugqiba ukuthenga kwakho
Impumelelo ukusukela kusuku lokuqala
Joyina amaqela ethu eVIP
Funda ukurhweba njengomntu oqalayo: ukuba usaqala nje kwihlabathi, ngokuqinisekileyo ufike kwindawo elungileyo. Iwebhusayithi yethu iya kukuxhobisa ngazo zonke izixhobo ezifunekayo ukuze ufumane umsebenzi wakho wokurhweba uhambe ngonyawo lwasekunene.
Sinikezela ngezikhokelo ezibanzi kuzo zonke izinto zorhwebo-ezinje ngokusebenza kweshishini elinamawaka ezigidi zeeponti, zintoni iiCFDs kwaye kutheni zibalulekile kwiinjongo zakho zotyalo-mali lwexesha elide, ubungakanani, ukusasazeka, iiodolo zentengiso, kunye nayo nayiphi na into Sicinga ukuba ufanele uyazi ngaphambi kokuba uqale ukubeka engozini imali yakho.
Ngokubalulekileyo, xa uchitha ixesha eliyimfuneko ukhangela izixhobo zethu ezininzi zemfundo, uya kulishiya iqonga lethu ngezakhono ezifunekayo kunye nolwazi ukuze uphumelele kwimizamo yakho yorhwebo kwi-Intanethi.
Ukufunda ukurhweba njengoMqali: Lusebenza njani uRhwebo kwi-Intanethi?
Ukuba awuzange ubeke nalinye urhwebo ebomini bakho, kubalulekile ukuba uyazi into oyenzayo ngaphambi kokuba uhlukane nemali yakho. Emva kwayo yonke loo nto, ukurhweba kwi-Intanethi kuza neengozi ezininzi-uninzi lwazo olunokuthintela amandla akho okwenza inzuzo engaguqukiyo. Kananjalo, masiqale ngokufumana isishwankathelo sedigri esingama-360 sendlela yokurhweba ukuya esiphelweni.
Ukukhetha eyona Broker ikwi-Intanethi njengoMntu ofunda ukurhweba
Ukuze uhwebe kwi-intanethi, kuya kufuneka usebenzise i-broker. Kudala zihambile iintsuku apho kufuneka ubeke iiodolo zokuthenga kunye nokuthengisa ngefowuni ngokwesiko umthengisi.
Ngokuchasene noko, yonke into ngoku yenziwe kwi-Intanethi. Ngapha koko, ayisiyi kuphela ukuba ungarhweba ngentuthuzelo yekhaya lakho, kodwa uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi ngoku banikezela usetyenziso olusebenzayo. Kananjalo, ngoku unokurhweba ngelixa usendleleni.
Ngale nto ithethwayo, kukho amawaka ngamawaka wabarhwebi abakwi-Intanethi abaxhasa iinkonzo zemihla ngemihla. Kwelinye icala, oku kuluncedo kakhulu ngokwembono yakho njengomrhwebi, njengokugcwalisa kwamaqonga ngaphezulu kuthetha ukuba abathengisi mabaphakamise i-ante ukuze bazikhusele kukhuphiswano.
Oku kunokuza ngokomrhumo ocuthiweyo wokurhweba kunye nokusabalalisa okuqina, okanye iimpawu ezintsha ezifana 'Khuphela u shishino'. Kwelinye icala, oku kwenza ukuba kube nzima kakhulu ukwazi ukuba leliphi iqonga lokurhweba kwi-Intanethi onokuthi ubhalise nalo.
Ukhetha njani iQonga lokuRhweba kwi-Intanethi?
Ukukunceda apha endleleni, sidwelise ezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele xa ukhetha umrhwebi okwi-Intanethi.
Ukuze unikeze ngeenkonzo zokurhweba kwi-intanethi kubathengi abathengisayo abase-UK, ii-brokers kufuneka zilawulwe nguGunyaziwe wokuPhatha kwezeMali (FCA). Ngaloo ndlela, oku kuyimfuno engaxoxisiyo xa kuziwa ekukhetheni iqonga elitsha.
Kwiimeko ezininzi, umrhwebi okwi-intanethi uza kudwelisa inombolo yobhaliso yeCAFA, onokuthi emva koko ubhekise kuyo kwiwebhusayithi yomlawuli. Ukuba ayenzi njalo, unokukhangela igama lomrhwebi kwi-Intanethi kwirejista yeCAA. Ekugqibeleni, ukuba umrhwebi akafumani layisensi ye-FCA, kuya kufuneka uliphephe iqonga kuzo zonke iindleko.
Kuya kufuneka ukuba uqaphele ukuba yeyiphi indlela yokubhatala okhetha ukuyisebenzisa xa kufikwa ekufakeni nasekurhoxiseni imali. Eyona ndlela ilula yokwenza oku kukudlula kwi-debit okanye kwikhadi letyala, njengoko iidipozithi zihlala zingxamisekile.
Ngapha koko, abanye abarhwebi bayakuvumela ukuba usebenzise i-wallet efana nePayPal okanye iSkrill, nangona oku akusoloko kunjalo. Ukongeza, uninzi lwabarhwebi baxhasa ukudluliselwa kwebhanki. Nangona oku kudla ngokuvumela imida ephezulu, ukudluliselwa kwebhanki lolona khetho lucothayo lwentlawulo.
✔️ Iintlawulo kunye nokusasazeka
Uya kudinga ukuhlawula umrhumo wolunye uhlobo ukuze usebenzise iqonga lokurhweba kwi-Intanethi, njengoko abathengisi bakushishino lokwenza imali. Kuya kufuneka uhlawule ikhomishini eyahlukileyo, eyipesenti yesixa osithengisayo. Umzekelo, ukuba ubeka urhwebo olunexabiso elingange- $ 4,000, kwaye umrhwebi uhlawulisa i-0.2% kwikhomishini, uya kuthi ke ekugqibeleni uhlawule i- $ 8 kwimirhumo.
Ngaphezulu kwekhomishini, kuya kufuneka ujonge ukusasazeka. Lo ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' kunye nexabiso 'lokuthengisa'. Ukuba ukusasazeka kuphezulu kakhulu, kuya kuba nefuthe ngqo kumandla akho okwenza inzuzo engaguqukiyo. Umzekelo, ukuba ubungakanani bokusasazeka kwipesenti yokwenyani ye-1%, kuya kufuneka wenze ubuncinci i-1% ukuze nje uphule.
Kuya kufuneka kwakhona uthathele ingqalelo inani, kunye nohlobo lwezixhobo zemali ezisingathwa ngumthengisi. Kwiimeko ezininzi, amaqonga orhwebo online iya kugubungela i-forex kunye ne-CFDs. Ngokumalunga neyokuqala, kulapho uthenga kwaye uthengise iimali, ngombono wokufumana inzuzo kwiintshukumo ezincinci zamaxabiso.
Kwimeko yee-CFDs (ikhontrakthi-ye-yantlukwano), oku kukuvumela ukuba uqikelele phantse kulo naluphi na udidi lwe-asethi, ngaphandle kokufuna ukuba ngumnini we-asethi esisiseko. Umzekelo, ii-CFDs zikuvumela ukuba uthengise nantoni na evela kwisitokhwe kunye nezabelo, igolide, ioyile, irhasi yendalo, imakethi yesitokhwe indices, amazinga enzala, ikamva, kunye ne-cryptocurrencies.
✔️ Izixhobo zokurhweba
Ungcono usebenzisa i-broker ebeka ugxininiso oluqinileyo kuyo Iimpawu zobugcisa. Izixhobo ezinjalo zikuvumela ukuba uhlalutye iintsingiselo zamaxabiso embali kumcimbi ophambili. Ngokwenza njalo, ubeka elona thuba lihle lokuvavanya ukuba ikamva le-asethi oyikhethileyo liya kuya phi.
Iimpawu zobugcisa ezaziwayo ziquka i-stochastic oscillators, ukuhamba kwemida (MA), isalathiso samandla esihlobene (RSI), kunye neebhendi zeBollinger. Ekugqibeleni, kuya kufuneka ukhethe amaqonga okurhweba kwi-intanethi anikezela ngemiqondiso emininzi yezobugcisa.
Ukufikelela kwizixhobo zophando ikwayinto ebalulekileyo ekufuneka ujonge kuyo xa ukhetha iqonga elitsha lokurhweba. Oku kuya kubandakanya uhlaziyo lweendaba zexesha lokwenyani ezinokuthi zibe nefuthe kwiasethi ethile okanye kumzi mveliso.
Ngapha koko, iluncedo xa abathengisi benecandelo lohlalutyo. Kulapho abathengisi abaziingcali bapapasha khona izimvo zabo apho iasethi ethile inokuthi ihambe kwiimarike kwithuba elifutshane.
Vula i-Akhawunti eneQonga lokuRhweba kwi-Intanethi
Nje ukuba ukhethe umrhwebi okwi-intanethi ohlangabezana neemfuno zakho, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Inkqubo yobhaliso ihlala ingathathi ngaphezulu kwemizuzu emi-5-10. Ngokusisiseko, umrhwebi kufuneka azi ukuba ungubani, nokuba unamava afunekayo okurhweba kwi-Intanethi. Oku kukuqinisekisa ukuba iqonga lihlala lihambelana nemigaqo echazwe yi-FCA.
Nalu ulwazi oluya kudinga ukungena xa uvula iakhawunti kunye nendawo yokuthengisa.
✔️ Ulwazi lomntu
Uya kudinga ukufaka iinkcukacha zakho. Oku kuyakubandakanya igama lakho elipheleleyo, idilesi yasekhaya, umhla wokuzalwa, inombolo yeinshurensi yelizwe kunye neenkcukacha zonxibelelwano.
✔️ Ulwazi lwezeNgqesho
Umrhwebi kuya kufuneka ayazi imeko yengqesho kunye nomvuzo wakho wonyaka emva kwerhafu.
✔️ Ukuma kwezeMali
Uya kudinga ukuba umthengisi azi malunga nexabiso lakho eliqikelelweyo, nokuba ungumthengisi okanye umthengi weziko.
✔️ Amava oRhwebo angaphambili
Umrhwebi uza kukubuza imibuzo emalunga namava akho okuthengisa kwangaphambili. Oku kuyakubandakanya uhlobo lweeasethi ozithengisileyo ngaphambili, kunye nobungakanani obuqhelekileyo bezorhwebo
Ukufunda ukurhweba kwi-Broker ekwi-Intanethi kuqala ngokuQinisekiswa kwesazisi
Ukuze uhlale uthobela imithetho echasene nokuchithwa kwemali, onke amaqonga orhwebo alawulwa yi-FCA kuya kufuneka aqinisekise isazisi sakho. Inkqubo ithe tye kwaye ifuna ukuba ulayishe ikopi yesazisi esikhutshwe ngurhulumente, kunye nobungqina bedilesi.
Nangona abanye abarhwebi bekuvumela ukuba ubeke imali ngaphambi kokuba inkqubo yokuqinisekisa igqitywe, ngekhe ukwazi ukukhupha imali de amaxwebhu akho aqinisekiswe. Kananjalo, kungcono ukufumana inkqubo ye-KYC (Yazi uMthengi wakho) ngaphandle nje kokuba uvule iakhawunti.
Ukwenza njani ukuba ube neDipozithi yokuqala kunye nokurhoxa xa ufunda ukurhweba
Xa kuziwa kwinkxaso mali kwiakhawunti yakho yomrhwebi, kuya kufuneka unikwe inani leendlela ezahlukeneyo zokuhlawula. Nangona oku kuya kwahluka kwi-broker-to-broker, sidwelise eyona dipozithi iqhelekileyo kunye neendlela zokurhoxa ngezantsi.
✔ I-Debit kunye ne-Credit Cards
Ukubeka imali ngedebhithi / kwikhadi letyala kuhlala kukhokelela ekubeni imali ifakwe kwikhredithi ngoko nangoko. Gcina iliso kwimirhumo-ngakumbi ukuba usebenzisa ikhadi lekhredithi. Ngelixa umrhwebi engenakho ukukuhlawulisa nayiphi na intlawulo nge-say, umnikezeli wekhadi letyala unokuklama idipozithi njengemali ehamba phambili. Ukuba iyakwenza oko, oku kungatsala umrhumo we-3%, ngenzala isetyenziswe kwangoko.
✔ Udluliselo lwebhanki
Uninzi lwamaqonga orhwebo akwi-Intanethi ayakwamkela ukuhanjiswa kwebhanki. Inkqubo icotha kakhulu kunentlawulo yetyala / lekhadi letyala, nangona imida ihlala iphezulu. Ukuba idiphozithi yenziwa ngeNtlawulo ekhawulezileyo yase-UK, iimali zinokubhalwa kwangolo suku lunye.
Nangona ingaqhelekanga kune-debit / ikhadi letyala okanye ukudluliselwa kwebhanki, inani labathengisi abatsha ngoku bamkela i-e-wallets. Oku kubandakanya ukuthanda kwe PayPal, Skrill, yaye Neteller. Iidiphozithi ze-E-Wallet azihlawulelwa kuphela, kodwa kwiimeko ezininzi, zikuvumela ukuba urhoxise imali yakho ngexesha elikhawulezayo.
Funda ukurhweba nge Forex
Ukuba unomdla wokufumana inzuzo kwi-multi-trillion yesithuba se-forex, uya kuthi uthenge kwaye uthengise iimali. Umbono ogqwesileyo kukwenza inzuzo kwaye xa amaxabiso otshintshiselwano lwemali esihamba.
Kananjalo, uya kuthengisa i-forex 'yeebini', ezineemali ezimbini ezahlukeneyo. Umzekelo, ukuba ufuna ukuthengisa i-pound sterling ngokuchasene ne-euro, kuya kufuneka uthengise i-GBP / EUR.
Ngale nto ithethwayo, abanye abathengisi baya kudwelisa ngaphezulu kwe-100 yezibini zemali ezahlukeneyo. Ezi zibini zemali ziye zahlulwa zaziindidi ezintathu eziphambili- ubukhulu, abantwana, kunye neexotic.
Njengoko igama libonisa, izibini eziphambili zineemali ezimbini 'eziphambili'. Oku kuyakuquka iimali ezivela kwezonaqoqosho zinkulu ehlabathini, njengedola yaseMelika, iponti yaseBritane, iyuro, iJapan yen kunye neFranc yaseSwitzerland.
If ukhona Ukuqala nje kwihlabathi lorhwebo lwe-forex, kuyacetyiswa ukuba unamathele kwizibini ezinkulu. Oku kungenxa yokuba ii-majors zidibana namanqanaba asezantsi okuguquguquka, ukusasazeka okungqongqo, kunye neemfumba zokungabi namali.
Izibini ezincinci ziya kuba nemali enye enkulu kunye nemali enye engamanzi engaphantsi. I-AUD / USD ngumzekelo ophambili wesibini esincinci. Idola yaseMelika imele eyona mali iphambili kwezi zibini, ngelixa idola yase-Australia iyimali engafunwayo kangako.
Nangona abantwana besaxhamla kwixabiso elininzi lemali, ukusasazeka kuhlala kubanzi kakhulu kunee-majors. Oku kuthetha ukuba ukurhweba ngabantwana kubiza kakhulu ekuhambeni kwexesha. Ngale nto ithethwayo, ukungazinzi kuphakame kancinci kwiibini ezincinci, ke kukho amathuba amaninzi okwenza inzuzo enkulu.
Iibhanki zemali zangaphandle ziya kuba nemali ekhulayo kunye nemali enkulu. Oku kunokubandakanya idola yaseMelika kunye nedong yaseVietnam, okanye iponti entle ngokuchasene nelira yaseTurkey.
Ngayiphi na indlela, izibini ezingaqhelekanga zinokutshintsha kakhulu, kwaye ukusasazeka kuhlala kubanzi kakhulu. Kungenxa yoko le nto ungcono ekuthinteleni i-exotic de ufunde ukurhweba nge-forex kwinqanaba eliphambili.
Lusebenza njani uRhwebo lwe-Forex?
Nje ukuba ukhethe isibini semali esithatha ubumnandi bakho, kuya kufuneka ke ubone ukuba yeyiphi indlela eya kuthi intengiso ihambe ngayo. Ngaphambi kokuba singene kwisiseko, kubalulekile ukucacisa umahluko phakathi komyalelo 'wokuthenga' kunye 'nokuthengisa' iodolo kwimeko yorhwebo lwangaphambili.
✔️ Ukuba uyakholelwa ukuba imali ibekwe kwi icala lasekhohlo esi sibini siza Nyusa Ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i thenga iodolo.
✔️ Ukuba uyakholelwa ukuba imali ibekwe kwi kwicala lasekunene esi sibini siza Nyusa Ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i thengisa iodolo.
Umzekelo, masithi uthengisa nge-GBP / USD. Ukuba uziva ngathi i-GBP inokuthi inyuke ngexabiso xa ithelekiswa ne-USD, siyakubeka i-oda yokuthenga. Ngokufanayo, ukuba uziva ngathi i-USD izakwenyuka ngokuchasene ne-GBP, ungabeka i-odolo yokuthengisa.
Umzekelo woMyalelo 'woThenga' kuRhwebo lwe-Forex
Ukuncamathisela umxholo we-GBP / USD, masithi ubeke i-oda ye- '500' yokuthenga. Oku kuthetha ukuba uyakholelwa ukuba i-GBP iya kunyuka kwixabiso xa ithelekiswa ne-USD.
Ixabiso le-GBP / USD okwangoku i-1.32.
Ufake i-odolo yokuthenga i-£500.
I-GBP / i-USD inyuka kwi-1.34, oku kuthetha ukuba i-GBP iya iba namandla ngokuchasene ne-USD.
Oku kubonisa ukunyuka nge-1.51%.
Inzuzo yakho iya kuba yi-£7.55 (£500 x 1.51%).
Umzekelo woMyalelo 'woThengisa' kuRhwebo lwe-Forex
Kulo mzekelo, siza kunamathela kwi-GBP / USD. Kuphela ngeli xesha, siza kufaka i-odolo 'yokuthengisa'. Oku kuthetha ukuba uyakholelwa ukuba i-USD iya kuyigqwesa i-GBP.
Ufake i-odolo yokuthengisa ye-£1,500.
I-GBP / i-USD iyancipha ukuya kwi-1.29, oku kuthetha ukuba i-USD iqina ngakumbi ngokumelene ne-GBP.
Oku kubonisa ukuhla nge-2.27%.
Inzuzo yakho iya kuba yi-£34.05 (£1,500 x 2.27%).
Funda ukurhweba ngeeCFD
Icandelo lesibini eliphambili lendawo yokurhweba kwi-Intanethi lelo leCFDs. Njengoko besesitshilo ngokufutshane ngaphambili, ii-CFD zikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise phantse lonke udidi lweeasethi onokucinga ngazo. Kungenxa yokuba awunyanzelekanga ukuba ube ngumnini okanye ugcine iasethi esisiseko ukuze utyale imali kuyo.
Endaweni yoko, ii-CFD zilandelela nje ixabiso lehlabathi lokwenyani leasethi ekuthethwa ngayo. Kananjalo, iiCFD zikulungele ukufikelela kwiindawo zentengiso ekunokuthi kube nzima ukufikelela kuzo.
Apha ngezantsi sidwelise iiklasi zeeasethi eziphambili ezigutyungelwa ziiCFD.
✔️ Izitokhwe kunye nezabelo.
✔️ Amaxabiso enzala.
✔️ Iintsimbi eziqinileyo.
Lusebenza Njani Urhwebo lweCFD?
Ngokwendlela urhwebo lweCFD olusebenza ngayo, oku kuyafana nokuthenga kunye nokuthengisa izibini ze-forex. Umahluko ophambili ekufuneka wenziwe ukuba uwazi ngeli nqanaba sisigama. Ngelixa kwi-forex sihlala simisela ukuthengisa njengokuthenga okanye ukuthengisa i-odolo, kwisithuba seCFD sisebenzisa amagama 'amade' kunye 'amafutshane'.
Ngapha koko, iiCFD azizi ngambini njenge-forex. Endaweni yoko, uthengisa iasethi ngokuchasene nexabiso lokwenyani lehlabathi kwimali elawulayo, edla ngokuba yidola yaseMelika. Umzekelo, nokuba uthengisa ii-CFD ngohlobo lwesitokhwe, ioyile, irhasi yendalo, okanye igolide- iiasethi zixhomekeke kumaxabiso xa kuthelekiswa ne-USD.
✔ Ukuba uyakholelwa ukuba i-asethi iya Nyusa Ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i elide umyalelo.
✔ Ukuba uyakholelwa ukuba i-asethi iya kuncipha Ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i mfutshane umyalelo.
Le yenye yezona zinto zinomtsalane kurhwebo lweCFDs, njengoko uya kuhlala unakho ukuthengisa ngokufutshane. Kulapho uthelekisa khona ngexabiso lokulahleka kweasethi. Le yinto ekunokuthi kube nzima ukuyenza endaweni yotyalo-mali yemveli njengomthengi wentengiso.
Funda ukurhweba ngezabelo
Ukuba ujonge Izabelo zorhwebo kwisiseko sexesha elide, emva koko uya kuba ngcono ekuthengeni izabelo zezabelo ozikhethileyo kwi-stockbroker eqhelekileyo. Oku kungenxa yokuba uya kuba ngumnikazi wesitokhwe ngokuthe ngqo, oku kuthetha ukuba uya kuqhelana noluhlu lokukhusela abatyali-zimali.
Ngokomthetho, oku kubandakanya ilungelo elisemthethweni nakweyiphi na intlawulo yesahlulo esasazwa yinkampani ekuthethwa ngayo-ngokulingana nenani lezabelo ozibambayo.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufunda ukuthengisa impahla ngexesha elifutshane, kuya kufuneka usebenzise iqonga leCFD. Kungenxa yokuba iifizi ezinxulunyaniswa nokuthenga kunye nokuthengisa isitokhwe ngengqondo yemveli ziphezulu kakhulu kuneeCFD. Ngapha koko-njengomthengi wentengiso uza kuba nethuba elincinci, ukuba likho, lokuba ube nakho ukuthengisa ngokufutshane kwi-equity oyikhethileyo. Kwakhona, le yinto enikezelwa phantse onke amaqonga e-CFD.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufikelela kwiimarike zamasheya zehlabathi kwi-intanethi, uya kuba neendlela ezimbini-ukuthenga nokuthengisa izabelo ezizodwa, okanye utyalomali kwisalathiso.
✔ URhwebo lweZabelo zoMnye
Ukuba unezakhono ezifunekayo zokutyala imali kwiinkampani ezizezinye, uya kuba nokufikelela kumawakawaka eemali zeCFD. Oku kubandakanya iinkampani ze-blue-chip ezidweliswe kwiimarike ezidumileyo ezinje ngeNASDAQ kunye neLondon Stock Exchange, kunye neenkampani ezincinci ukuya kweziphakathi.
Ukuba ukhetha indlela yeCFD, ixabiso lezabelo zakho ozikhethileyo liza kubonisa oko kwexabiso lehlabathi lokwenyani. Umzekelo, ukuba ixabiso lezabelo zeCuba laseBritane laseMelika linyuka nge-2.3% kwisithuba seeyure ezingama-24, i-CFD yayo eya kuthi inyuke nge-2.3%.
✔ Ukurhweba A Stock Market Index
Ukuba unomdla wokurhweba ngamasheya kunye nezabelo, kodwa awunalo ulwazi olufunekayo lokukhetha iinkampani ezizezinye, kunokuba kufanelekile ukuqaphela isalathiso semarike yemasheya.
Ikwabizwa ngokuba 'zii-indices', ii-indexed market indexes zikuvumela ukuba uqikelele kumakhulu eenkampani kurhwebo olunye- emva koko ukwahlula isikhundla sakho kumashishini amaninzi.
Umzekelo, ngokutyala imali kwi-S & P 500, ungathenga izabelo kwi-500 yeenkampani ezinkulu ezikuluhlu lwase-US. Kwangokunjalo, isalathiso se-FTSE 100 sikuvumela ukuba utyale imali kwiinkampani ezinkulu ezili-100 ezidweliswe kwiLondon Stock Exchange.
Kwakhona, ukuba ukhetha isalathiso semarike yemasheya ngohlobo lweCFD, uya kuba nokukhetha ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane. Kananjalo, uya kuba nethuba lokwenza inzuzo nokuba iimarike zesitokhwe ezibanzi ziphantsi.
Nokuba uthengisa i-forex okanye i-CFDs-kufuneka ube nokuqonda okuqinisekileyo kokusasazeka. Kwimo yayo esisiseko, lo ngumahluko phakathi kwexabiso 'lokuthenga' kunye nexabiso 'lokuthengisa'. Ngaphezulu kweekhomishini zorhwebo, ukusasazeka kuqinisekisa ukuba abathengisi kwi-Intanethi benza imali.
Ubungakanani bokusasazeka kubalulekile kuwe njengomrhwebi, njengoko kubonisa ukuba yeyiphi imirhumo ohlawula ngokuthe ngqo kuyo. Umzekelo, ukuba kukho isithuba se-0.5% ekusasazeni xa kuthengiswa amasheya, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka wenze ubuncinci i-0.5% kwinzuzo ukuze nje uphule.
Umzekelo wokuSasaza kwii-CFD
Eyona ndlela ilula yokubala ukusasazeka xa kuthengiswa iiCFD kukusebenza nje umahluko wepesenti phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengisa.
Ujonge ukuhamba 'ixesha elide' kwioli.
Umrhwebi wakho unikezela ngexabiso 'lokuthenga' le-$71.
Ixabiso 'lokuthengisa' li-$69.
Oku kuthetha ukuba ukusasazeka ngumahluko phakathi kwe-$ 69 kunye ne-$ 71.
Ngokwepesenti, oku kusasazeka kwe-2.89%.
Nokuba uthatha isigqibo sokuhamba ixesha elide okanye elifutshane kwioyile, uya kuhlawula ukusasazeka kwe-2.89%. Oku kuthetha ukuba kuyakufuneka wenze ubuncinci i-2.89% kwinzuzo ukuze nje uphule.
✔️ Ukuba uyahamba elide kwioyile, kuya kufuneka uhlawule $71. Ukuba ukhawuleza uphume endaweni yakho, uya kwenza njalo ngexabiso lokuthengisa $69. Kananjalo, udinga ixabiso leoyile ukuze Nyusa by 2.89% Ukuqhekeza nje.
✔️ Ukuba uyahamba mfutshane kwioyile, kuya kufuneka uhlawule $69. Ukuba ukhawuleza uphume endaweni yakho, uya kukwenza oko ngexabiso lokuthenga $71. Kananjalo, udinga ixabiso leoyile ukuze kuncipha by 2.89% Ukuqhekeza nje.
Ngaba ufuna ukwazi malunga nokuNyulwa xa ufunda ukurhweba?
oluxhathisayo zombini sisixhobo esinomdla kwaye siyingozi kakhulu onokuthi usifumane kwiindawo ezininzi zokurhweba kwi-intanethi. Ngamafutshane, i-leverage ikuvumela ukuba urhwebe kumanqanaba aphezulu kunento onayo kweyakho akhawunti yomrhwebi. Isixa esikhethekileyo simiselwa yinkalo ethile, enjengesi-2:1, 5:1, okanye isi-30:1. Okukhona uphezulu umba, kokukhona urhweba kunye kwaye ke - kokukhona iphezulu inzuzo okanye ilahleko yakho iya kuba.
Umzekelo, masithi une- £ 300 kuphela kwiakhawunti yakho. Ufuna ukuhamba ixesha elide kwirhasi yendalo, njengoko uziva ngathi iasethi ayixabisekanga kakhulu. Kananjalo, usebenzisa uxhathiso lwe-10: 1, okuthetha ukuba uthengisa nge- £ 3,000.
Kulo mzekelo, i- £ 300 yakho ngoku ingumda. Ukuba ixabiso lezorhwebo lakho liye lehla nge-10: 1 (100/10 = 10%), uya kuphulukana nomgama wakho. Oku kwaziwa njenge 'kucinywa'. Kwangokunjalo, ukuba umda wakho wawuyi- £ 300 kwaye wawurhweba nge-25: 1, ungapheliswa ukuba i-asethi yehle nge-25: 1 (100/25 = 4%).
Ukuba ungumrhwebi othengisa e-UK (okanye naliphi na ilizwe elilungu laseYurophu malunga naloo nto), uya kufakwa kwimida yokunyusa efakwe liGunya lezoKhuseleko laseYurophu kunye neeMarike (ESMA).
Unokukhetha eyona broker ilungileyo kwi-intanethi Apha.
Ukufunda ukurhweba njengomntu oqalayo: kusebenza njani ukurhweba kwi-Intanethi?
Ukukhetha oyena mthengisi ubalaseleyo kwi-intanethi njengomntu ofunda ukurhweba
Vula i-akhawunti ngeqonga lokurhweba kwi-intanethi
Ukufunda ukurhweba kwi-broker ye-intanethi kuqala ngokuqinisekiswa kwesazisi
Uyenza njani idiphozithi yokuqala kunye nokurhoxiswa xa ufunda ukurhweba
Funda ukurhweba forex
Urhwebo lwe forex lusebenza njani?
Umzekelo womyalelo 'wokuthenga' kwintengiso ye-forex
Umzekelo we-odolo 'yokuthengisa' kurhwebo lwe-forex
Funda ukurhweba cfds
Funda ukurhweba ngamasheya
Umzekelo wokusasazeka kwiicfds
Ngaba ufuna ukwazi malunga nokuxhamla xa ufunda ukurhweba?
Nabu ubungqina obungakumbi beziphumo zethu
Ndithengise iminyaka eyi-4 ...
Ndithengise iminyaka emi-4 kwaye ndenze iidola ezimbalwa apha naphaya. Ndijoyine iLearn2trade kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Kuyamangalisa okokuqala ukuba ndenze ngaphezulu kwe-3000 yeedola. Isiginali ye-GBPJPY abayithumeleyo yayikwinqaku kwaye yenza nje i-2000 yeedola kwaye iseyi-1000 pips ukuya. Sele ndirhweba unyaka, kwaye bendisebenzisa i-Learn to Trade kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Ukusuka kumava am, i-L2T inomlinganiselo olungileyo wokuphumelela.
Olu hlaziyo lugxile kakhulu...
Olu hlaziyo lujolise ngakumbi kwikhosi nakwizixhobo zokufunda kunakwimiqondiso. Nangona abanye banokuziva ukuba ikhosi ye-forex ayifanele isicwangciso se- $ 99, kubaqalayo njengam, kuninzi onokukufunda kubo. Andilifumani eli mali njengotyalo-mali olubi ndicinga ukuba ndinokuzuza okuninzi ngento endiyifundileyo. Kukho amanqaku amaninzi asimahla anokukubonisa iintambo malunga nokuthengisa, ukuqonda imakethi, kunye nendlela yokufunda imiqondiso.
Ndingumsebenzisi wesignali yasimahla...
Ndingumsebenzisi wesignali yasimahla, kwaye kufuneka nditsho ukuba ndiyayixabisa kangakanani into yokuba i-Learn to Trade ithumela imiqondiso epheleleyo kubasebenzisi basimahla. Ndiye ndajonga ezinye iinkonzo zesignali ezimbalwa, kwaye uninzi lwazo zihlala zifihla inxalenye yemiqondiso enyanzelisa abasebenzisi ukuba babhalisele iprimiyamu ukwenza naluphi na urhwebo. Hayi i-L2T. Ukuba ubhalisa, uya kufumana zonke iinkcukacha ezifana nexabiso lokungena, ukuthatha inzuzo kunye nokuyeka ukulahlekelwa.
Ndingumsebenzisi wasimahla we Funda 2 Trade...
Ndingumsebenzisi okhululekileyo we-Funda imiqondiso ye-Forex ye-2 Trade. Kwaye ndiyayibulela kakhulu into yokuba bathumela ulwazi oluninzi ngeTelegram kubasebenzisi basimahla. Ungajoyina iqela leTelegram ngokukhangela kwi-app, kwaye uzibonele ukuba lungakanani na ulwazi olukhoyo. Into kuphela kukuba, ukuba ufuna ukufikelela kuhlalutyo olupheleleyo lokurhweba kufuneka ubhalisele iprimiyamu. Kodwa njengomrhwebi oqalayo oxhomekeke kakhulu kwimiqondiso kunophando, ndizimisele ukujonga ngaphezulu koko.
Ndingumsebenzisi weempawu zeVIP...
Ndingumsebenzisi we-VIP wesignali kwaye kukho izizathu ezimbalwa endikhethayo Funda ukuRhweba ngaphezu kwezinye iinkonzo zesignali. Okokuqala, abakunikezi izinto ezibangela ukuba uthenge kwaye uthengise. Nokuba imiqondiso yasimahla iza kunye nokuyeka-ilahleko, ukuthatha inzuzo, kunye nomngcipheko womvuzo. Izilumkiso zeTelegram zikwabandakanya uvavanyo lweemarike, uhlaziyo, uhlalutyo lwentengiso kunye nokunye. Umzekelo, ngalo Mvulo bathumele umyalezo malunga nokuba yeyiphi imiba eshukumayo yentengiso abayiqwalaselayo njengemizuzu yeentlanganiso zeFOMC.
Jonga zonke iindaba
IGolide iphinda ivavanya ubuphantsi bayo obudlulileyo njengoko inokuthi yehle ngaphezulu kwe-1,805 yeedola
Amanqanaba okuchasana okuPhambili: i-$ 1,900, i-$ 1,950, i-$ 2000Amanqanaba eNkxaso aPhambili: i-$ 1,750, i-$ 1, i-700, i-$ 1,650 yegolide (XAUUSD) Ixesha elide iTrend: Ixabiso le-BearishXAUUSD likwi-downtrend njengoko lingaqhubeka lihla ngaphantsi kwe-$ 1,805. Ixabiso legolide lehle laya kutsho kwi-1,784 yeedola kodwa lihlehlisiwe. Ivavanya ukuhla kwexabiso kwangaphambili kwe-13 kaMeyi. I […]
Uqikelelo lwexabiso le-DeFI Coin- I-DeFI Coin iyaqhubeka nokuNyusa kwayo ngomgca weBullish Trend Line
Uqikelelo lwexabiso leDeFI Coin- Julayi 1 DeFI Coin uqikelelo lwexabiso le-bullish. Imarike iqhubekile nentshukumo enyukayo emva kokujonga umsantsa wexabiso elifanelekileyo. DEFCUSD Ixesha elide Trend: Bullish (1 itshathi yeyure) DEFCUSD amanqanaba abalulekileyo: Iindawo zonikezelo: $0.1650, $0.1570 Iindawo zemfuno: $0.1210, $0.1110DeFI coin retracement ukusuka kwinqanaba lonikezelo kwi $0.1520 uye [...]
Lucky Block Price Forecast- LBLOCK/USD Yenza iBullish Breakout yeSiteshi esihlayo
Lucky Block Price Forecast- July 1 Lucky Block ixabiso uqikelelo lwexabiso lentengo ibiza ukunyuka kwimarike ukuya $0.0010600 zone ukumelana. I-LBLOCK / i-USD Ixesha elide: I-Bullish (i-30-Minute Chart) Amanqanaba aPhambili: Iindawo zokubonelela: $ 0.0011000, $ 0.0010600. Imimandla yeMfuno: 0.0009200, $0.0008810Ibloko ye-Lucky iye yenza ukuba ijelo le-bearish lingasebenzi ngekhefu kwaye liphinde livavanye kwitshathi yemizuzu engama-30. I […]
Ixabiso le-USDCHF libuyisela umva kwi-0.95 yeNqanaba leNkxaso
Uhlalutyo lwexabiso le-USDCHF - Julayi 01 Xa inqanaba lokuxhasa i-$ 0.95 libamba, ukunyuka kwe-bullish kunokunyuka, ixabiso le-USDCHF linokunyuka kwinqanaba, ngoko ke, amanqanaba e-0.96 anokufikelela kwaye anokuthi athambekele kwi-$ 0.97 kunye ne-$ 0.98 kwinqanaba. Ukuba iibhere ziphule inqanaba lenkxaso ye-0.95 yeedola, ixabiso linokuncipha ukuya kwi-$ 0.94, [...]
Uluntu lwaseTron luBhiyozela isikhumbuzo seSine kunye ne-100 yezigidi zeMilestone yoMsebenzisi kwisitayile esikhulu
I-Tron (TRX) i-DAO kunye noluntu lwayo lubhiyozele isikhumbuzo sesine se-blockchain kule veki, isiganeko esibalulekileyo kule projekthi. Uluntu lukwabhiyozele ukuwela umda wabasebenzisi abazizigidi ezili-100 ngesitayile esihle. Oku kungena kwi-club ye-100 yezigidi zabasebenzisi kuza kwiiveki emva kokuba iTron iqalise i-algorithmic Stablecoin USDD. Inethiwekhi ihlala inobundlongondlongo kwiinjongo zayo […]
ABASEBENZISI BANGAPHAMBILI NEENKQUBO ZOKUTSHINTSHA
Esona sikhokelo sigqibeleleyo sokuFunda indlela yokurhweba ngee-Forex Brokers
Ngaphandle kwamathandabuzo, umthengisi udlala indima ebalulekileyo kwimarike ye-Forex. Kodwa njengomqali, uyayiqonda into yokuba yeyiphi indima edlalwa ngabarhwebi? Funda eyethu Isikhokelo somthengisi we-Forex apha ukwazi ezona ndima ziphambili zomthengisi we Forex.
Funda ukurhweba ngokuSebenzisa Ezona platforms zokuRhweba kwi-Forex
Uninzi lwezorhwebo kufuneka lwenziwe njenge-newbie kwimarike ye-Forex, kodwa emva koko (kwakhona), ufuna elona qonga liphambili lokuthengisa ukuze wenze urhwebo lwakho. Kunjalo ngoba iphepha lethu apha liyacacisa ezona ziqonga zibalaseleyo zokuthengisa zabaqalayo.
IZICWANGCISO ZOKURHWEBA FOREX
Gcina iJenali yoRhwebo
Ijenali yokurhweba ilog nje yayo yonke imisebenzi yakho yorhwebo. Ngokwesiqhelo, ijenali ibonelela ngesixhobo kubo nabaphi na abathengisi abanzima abafuna ukuzivavanya ngokwabo. Kodwa kubaluleke ngantoni ukugcina iphephancwadi elahlukileyo? Masikuxelele yonke into ekufuneka uyazi Apha.
Utshintsho kumgangatho wenzala luchaphazela kakhulu intengiso ye forex. Utshintsho luhlala lwenziwa yenye yeebhanki ezisibhozo zehlabathi. Utshintsho lwenza iimpembelelo kwangoko kubarhwebi beemarike, kwaye ke, ukuqonda indlela yokusabela kunye nokuqikelela ukuba ezi ntshukumo ziya kuba zezokuqala Amanyathelo okwenza inzuzo ephezulu.
Iimpawu ze-Forex kunye ne-Crypto Signals
Ukuba unomdla simahla imiqondiso Forex kwaye imiqondiso ye-crypto -Joyina amaqela ethu asimahla eTelegram. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufikelela kumaqela ethu VIP kwaye ube namava angcono, ungafumana yethu Iimpawu ze forex zeVIP kwaye Iimpawu ze-crypto zeVIP.
I-Akhawunti ye Forex
Ulwazi olukwiwebhsayithi ye-learn2.trade nangaphakathi kweqela lethu leTelegram yenzelwe iinjongo zemfundo kwaye ayifanelanga kuthathwa njengengcebiso ngotyalo-mali. Ukurhweba kwiimarike zezemali kunomngcipheko ophezulu kwaye kusenokungafaneleki kubo bonke abatyali-mali. Ngaphambi kokurhweba, kufuneka uqwalasele ngononophelo injongo yakho yotyalo-mali, amava, kunye nomngcipheko wokutya. Ukurhweba kuphela ngemali olungele ukuphulukana nayo. Njengalo naluphi na utyalo-mali, kukho ithuba lokuba ungagcina ilahleko yolunye okanye lonke utyalo-mali lwakho ngelixa urhweba. Kuya kufuneka ufune iingcebiso ezizimeleyo phambi kokurhweba ukuba unamathandabuzo. Ukusebenza kwangaphambili kwiimarike akusona isalathisi esithembekileyo sentsebenzo yexesha elizayo.
I-Learn2.trade ayithathi xanduva ngelahleko eyenzeke ngenxa yomxholo onikwe ngaphakathi kumaqela ethu eTelegram. Ngokubhalisa njengelungu uyavuma ukuba asikuniki ngcebiso yezemali kwaye uthatha isigqibo malunga norhwebo olubeka kwiimarike. Asinalo ulwazi lwenqanaba lemali oyiyo.
Iwebhusayithi ye-learn2.trade isebenzisa iikuki ukuze ikubonelele ngamava angcono. Ngokundwendwela iwebhusayithi yethu kunye nesikhangeli sakho esivumela iikuki, okanye ngokwamkela isaziso somgaqo-nkqubo wecookies, uyavumelana nomgaqo-nkqubo wethu wabucala, ochaza ngepolisi yethu yeekuki.
Funda iQela loRhwebo eli-2 lingaze liqhagamshelane nawe ngokuthe ngqo kwaye ungaze ucele intlawulo. Sinxibelelana nabathengi bethu nge [imeyile ikhuselwe] Sineendlela ezimbini kuphela zeTelegram zasimahla ezinokufumaneka kwindawo. Onke amaqela eVIP ayafumaneka emva kokuthenga umrhumo. Ukuba ufumana nayiphi na imiyalezo evela nakubani na, nceda uyixele kwaye ungenzi naziphi na iintlawulo. Oku akusiyo i-Funda iQela le-2 loRhwebo.
Ilungelo lokushicilela © 2022 learn2.trade
Idiphozithi ye-250 yeedola kunye ne-LongHorn FX ukufumana ukufikelela simahla kwiiMpawu zethu zeVIP!
FUMANA IIMPAWU ZAMAVIP
Urhwebo kwi-MT4 ngeXabiso ukuya kuthi ga kwi-1: 500! Urhwebo kwi-MT4 ngeXabiso ukuya kuthi ga kwi-1: 500!
Sisebenzisa ii-cookies ukuqinisekisa ukuba sikunika amava afanelekileyo kwiwebsite yethu. Ukuba uqhubeka usebenzisa le ndawo siya kuthatha ukuba uyavuya ngayo.OkUmthetho wabucala
Joyina wethu yocingo Iziteshi
fundaIjelo le-2 Trade Forex
funda2Ijelo leCrypto yoRhwebo